Soalala: nandray ny fankalazam-paritry ny Andro maneran-tany ho an’ny Tontolo iainana | Région Boeny
«Ndao hankafy sy hiavana amin’ny zava-boahary ary hiady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro». Io no loha-hevitra nanamarihana ny andro maneran-tany ho an’ny tontolo iainana. Tao amin’ny Kaominina Soalala, distrikan’I Soalala ihany, no nankalazana izany teto Boeny, ny 07, 08, 09 jiona 2017.
Fambolena honko faobe tao amin’ny Fokontan’i Soalala sy Amboroky ary Antanamifafy no nanamarihana ny fankalazana, hanaporofoana fa tsy misaraka amin’ny zanakolombolena ny zavaboahary araka ny fanentanana nataon’ny talem-paritry ny Tontolo iainana sy ny Haivoary ary ny Ala. Nandray anjara feno tamin’izany ny Préfet an’i Mahajanga sy ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy.
Dinika sy ady hevitra no nanohizana ny fankalazana, niarahan’ny fokonolona sy ireo tompon’andraikitra ara-panjakana tonga tany an-toerana, tao amin’ny Lapan’ny distrikan’i Soalala, mikasika ny fiarovana ny ala. Teo ihany koa ny fanazavana ny fahazoan-dàlana amin’ny fitrandrahana ny ala ao amin’ny Kaominina Ambohipaky, Fokontany Andrafiatoka izay ahitana toerana roa samy hafa azo trandrahana amin’ny alàlan’ny atao hoe «Adjudication». Izany hoe atolotra ho trandraha amin’ny alàlan’ny tolo-bidy ara-panjakana ireo ala ireo, ary izay mpitrandraka nahafeno ny fepetra no mahazo fahazoan-dàlana hisehatra ao.
Teo ihany koa ny fandraisana vahaolana avy amin’ny mpivory tsirairay, ary noraisina sy navadika ho lasa tetikasa maharitra hiarovana ny tontolo iainana ny hevitr’izy ireo.
Ankoatr’ireo dia nisy ny fampahafantarana ny lalàna fampiharana nataon’ny solotenan’ny Bianco, izay tonga tany an-toerana. Noresahina avy eo ny fampiharana ny Dinan’ny Boeny miray Dia amin’ireo mpanimba ny zava-boahary ao Namoroka, ary indrindra ho an’ireo mpanondrana ny sokatra angonoky ao Baie de Baly.
Namaranana ny lanonana dia ny fizarana karatra ho an’ny mpanjono an-dranomasina miisa 150 sy ny fametahana laharan’ny lakana mitovy isa amin’izay, ao Soalala. Raha atotaly hatreto, dia mpanjono an-dranomamy miisa 336 ary an-dranomasina miisa 1231 no efa nahazo karatra manerana ny faritra Boeny nanaomboka y taona 2016 no makaty.Ny hanatsarana ny fenitra sy kalitao ara-mpanjonoana no tanjon’ny hetsika toy izao hoy ny talem-paritry ny Harena anaty rano sy ny Jono.
Ny Jono sy ny Fiompina hazandrano, antoky ny fampandrosoana ny faritra Boeny. Io rahateo no loha-hevitra ho voizin’ny foara ekonomika Boeny Mionjo andiany faha-efatra amin’ny volana aogositra ho avy izao.